Nagarik News - ‘बाँचिरहू चार्ली हेब्डो'
‘बाँचिरहू चार्ली हेब्डो'
09 Jan 2015 | 07:28am
शुक्रबार २५ पुष, २०७१
पेरिस-फ्रान्सेली व्यंग्य पत्रिका ‘चार्ली हेब्डो' का सम्पादक–कार्टुनिस्टहरूले सन् २०१२ मा सरकारको सल्लाह उल्लंघन गर्दै इस्लामिक धर्मगुरु मोहम्मदको नग्न ‘क्यारिकेचर' प्रकाशित गरेका थिए। त्यसलगत्तै पत्रिकाको कार्यालयमा ‘पेट्रोल बम' प्रहार भयो। फ्रान्सले आक्रमणको डरले करिब २० वटा देशमा रहेका आफ्ना दूतावास, सांस्कृतिक केन्द्र तथा स्कुल बन्द गर्नुपर्‍यो।
‘के यसरी आगोमा तेल हाल्नु बुद्धिमानीपूर्ण हो?' चार्ली हेब्डोको उक्त कदमपछि तत्कालीन फ्रान्सेली विदेशी मन्त्री लरेन्ट फाबुयसले भनेका थिए।
पत्रिकाका सम्पादक स्टेफेन चार्बोनियरले भने न सरकारी अधिकारीहरूको सल्लाह माने न उनी कार्यालयमा भएको आक्रमणबाट विचलित भए। बरु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा अझ निडर भएर अघि बढिरहे। आफ्नो नामबाट भन्दा ‘चार्ब' का रूपमा बढी चिनिने उनै सम्पादक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा लड्दालड्दै बुधबारको आतंककारी हमलामा मारिएका छन्। दुई जना बन्दुकधारीले पत्रिकाको समाचार कक्षमै छिरेर अन्धाधुन्ध गोली हानी उनीसहित १२ जनाको हत्या गरे।
चार्ली हेब्डो ठूलो लगानी भएको र ठूलो संख्यामा छापिने पत्रिका होइन। सन् १९८१ पछि एक दशकसम्म त आर्थिक स्रोतको अभावमा पत्रिका बन्दै भयो। तैपनि फ्रान्समा यसले आफ्ना राजनीतिक व्यंग्यचित्रका कारण अलग्गै पहिचान बनाएको थियो। यसमा छापिने कार्टुन र व्यंग्यचित्रले धेरैलाई आच्छुआच्छु पार्योु। राजनीतिदेखि प्रहरी, बैंकर र धर्म समेतलाई कटाक्ष गर्नबाट पत्रिकाका सम्पादक–कार्टुनिस्ट पछि हटेनन्, जस्तोसुकै दबाब आए पनि।
पत्रिकाको पछिल्लो अंक पनि यो विशेषताबाट अछुतो थिएन। यसले पछिल्लो अंकमा जिजस क्राइस्ट छन् कि छैनन् भन्नेबारे व्यंग्यात्मक बहस चलाउँदै सुन्नी उग्रवादी लडाकु समूह इस्लामिक स्टेट (आइएस) का नेता अबु बकर अल–बग्दादीको तर्फबाट नयाँ वर्ष २०१५ को ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट' शुभकामना कार्ड छापेको थियो, जसमा लेखिएको थियो– ‘तपाईंको सुस्वास्थ्यका लागि'।
चार्ली हेब्डोको कटाक्षबाट कोही बचेका छैनन्। यो पत्रिकाले फ्रान्सका शीर्ष राजनीतिक नेतादेखि बुद्धिजीवीका रूपमा चिनिएका व्यक्तिको समेत रंगीन कार्टुन बनाएर छापेको छ। पन्नाका पन्ना छापिएका ती कार्टुनमा शीर्षनेता तथा बुद्धिजीवीलाई अक्सर जँड्याहा र यौन कार्यमा संलग्न अवस्थामा प्रस्तुत गरिएका छन्। कतिसम्म भने, पोपलाई प्रेमिकासँग देखाएर व्यंग्य गर्नबाट पनि चार्ली हेब्डो पछि परेन।
आफ्ना यिनै कार्टुन र क्यारिकेचरका कारण यो पत्रिका फ्रान्सलगायत अन्य युरोपेली राष्ट्रमा ‘व्यंग्य–ब्रान्ड' का रूपमा परिचित थियो। धार्मिक चरमपन्थीहरूले भने पत्रिकामा छापिने विषयवस्तुलाई सजिलै पचाउन सकेका थिएनन्। उनीहरू धर्म भनेको व्यंग्य वा हाँसोको विषय होइन र हुनुहुँदैन भन्दै पत्रिकाको आलोचना गर्थे। पटकपटक भौतिक आक्रमणसमेत गरे। बुधबारको हमला त्यसमध्ये सबभन्दा खतरनाक हो।
‘फ्रान्सेली जनता यो पत्रिकामा छापिने व्यंग्यचित्र मन पराउँछन्,' आमसञ्चार विषय अध्ययन गरिरहेका समाजशास्त्री जेन–मारी च्यारोनले भने, ‘सबै संस्कृतिमा व्यंग्यलाई सम्मान गरिन्छ वा सजिलै पचाइन्छ भन्ने छैन।'
उनले भनेजस्तै सबै संस्कृतिमा व्यंग्य र आलोचना सजिलै पाच्य नहुने भएकैले चार्ली हेब्डो धेरैको निशानामा पर्ने गरेको थियो। कार्यालयमा पेट्रोल बम प्रहार गरिनुका साथै कार्टुनिस्टका कम्प्युटर ‘ह्याक' गर्ने र ज्यानको धम्की दिनेसम्मका कार्य भएका छन्। सम्पादक चार्ब त अलकायदाको ‘हिट लिस्ट' मा समेत परेका थिए। अलकायदाले चार्बलाई इस्लामविरुद्ध अपराधका लागि ‘मस्ट वान्टेड' सूचीमा राखेको थियो। आफ्नै सम्पादक अलकायदाको खोजीसूचीमा पर्दा पनि चार्ली हेब्डोका कार्टुनिस्टले इस्लाम वा अन्य धर्मका विसंगतिमाथि व्यंग्य गर्न छाडेनन्। सम्पादक मण्डलको यही साहसका कारण फ्रान्सेली पत्रकारहरूबीच चार्ली हेब्डो सम्मानित थियो।
सन् २००६ मा उक्त पत्रिकाले रोइरहेका धर्मगुरु मोहम्मदको विवादास्पद कार्टुन क्यारिकेचर छाप्दा पनि विश्वभरका मुस्लिम समुदायले कडा आलोचना गरेका थिए। उक्त व्यंग्यचित्र त्यसअघि डेनमार्कको दैनिक अखबार ‘जिलान्डस पोस्टेन' मा प्रकाशित भएको थियो।
‘चार्ली हेब्डो सधैं नै प्रेस स्वतन्त्रताको सूचकका रूपमा रह्यो,' पेरिसस्थित पत्रकारिता स्कुलका निर्देशक बु्रनो प्याटिनोले भने, ‘फ्रान्समा व्यंग्यचित्रले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धार्मिक स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा विवाद खडा गर्यो्।'
हुन त यो पत्रिकाको प्रकाशन नै सन् १९७० मा तीव्र विवादबीच भएको थियो। पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स डे गोलेको निधनमा व्यंग्य गरेको भन्दै ‘हारा–किरी' को प्रकाशन प्रतिबन्धित भएपछि त्यहाँका पत्रकारले नयाँ पत्रिका खोलेका थिए। अमेरिकी कार्टुनिस्ट चार्ली ब्राउनका कार्टुन पुनःप्रकाशन गरी थालिएकाले यसको नाम ‘चार्ली हेब्डो' राखिएको हो। यसमा पछिल्लो शब्द ‘हेब्डो' ले फ्रान्सेली भाषामा साप्ताहिक प्रकाशन भन्ने बुझाउँछ।
फ्रान्सेली आमसञ्चारसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका अनुसार आक्रमणकारीलाई पत्रिकाको सम्पादक मण्डलमा रहेका र आक्रमणमा मारिएकाहरूको नामै थाहा थियो। मारिएकामध्ये चार्बोनियर (चार्ब) सन् २००९ देखि उक्त पत्रिकामा सम्पादक थिए भने ७६ वर्षीय जिन काबुट ‘काबु' र ८० वर्षीय जर्ज विलिन्स्को सुरुआतदेखि नै पत्रिकामा आबद्ध थिए।
डेनिस अखबारमा छापिएको मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मदको क्यारिकेचर पुनःप्रकाशन गरेर आलोचित हुनुपरे पनि यो पत्रिकाले सन् २०११ मा एक कदम अघि बढेर इस्लामिक कानुन सरियामाथि नै व्यंग्य गर्दै धर्मगुरु मोहम्मदलाई ‘प्रधान–सम्पादक' का रूपमा नियुक्त गरेको थियो। त्यतिबेला सम्पादक मण्डलले छोटो समयका लागि आफ्नो पत्रिकाको नामै परिवर्तन गरी ‘चरिया हेब्डो' राखेका थिए, जुन आफैंमा सरिया कानुनमाथि व्यंग्यको एक अंग थियो।
त्यसपछि सन् २०१२ मा फ्रान्स सरकारले चार्ली हेब्डोमाथि अर्को आक्रमण हुने आशंका गर्दै कार्यालय बाहिर सुरक्षा गस्ती बढायो। त्यतिबेला एक पत्रकार लरेन्ट लेगरले भनेका थिए, ‘फ्रान्समा हामीलाई सधैं नै लेख्ने र चित्र बनाउने स्वतन्त्रता छ।'
‘कोही व्यक्ति हाम्रो यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट खुसी छैनन् भने उनीहरू हामीलाई मानहानिको मुद्दा हाल्न सक्छन्, हामी आफ्नो बचाउ आफैं गर्नेछौं,' उनले अगाडि भने, ‘लोकतन्त्र भनेकै यही हो। लोकतन्त्रमा कसैले लेखेको वा बोलेको कुरा चित्त बुझेन भने बम हानेर आक्रमण गरिँदैन, छलफल गरिन्छ, बहस गरिन्छ। यहाँ हिंसाका लागि कुनै स्थान छैन। यही स्वतन्त्रता रक्षाको निम्ति हामीले चरमपन्थीहरूको दबाबविरुद्ध एकजुट हुनुपर्छ।'
च्यारोनका अनुसार यो पत्रिकाविरुद्ध थुप्रै मानहानिका मुद्दा परेका छन्। पछिल्लो समय रोमन क्याथोलिक चर्चबाट मात्र १४ पटक मानहानिको मुद्दा परिसकेको छ।
चार्ली हेब्डोका सम्पादक चार्बोनियर ‘चार्ब' को अन्तिम कार्टुन बुधबारकै अंकमा छापिएको थियो। आक्रामक देखिने हतियारधारी लडाकुको चित्र भएको उक्त कार्टुनमा लेखिएको थियो– ‘फ्रान्समा अझै कुनै आक्रमण भएन'। र, जवाफमा भनिएको थियो, ‘पर्ख! हामीसँग आफ्नो इच्छा पूरा गर्न जनवरी अन्तिमसम्मको समय छ।'
सन् २०१२ देखि नै सम्पादक चार्बसँग प्रहरी बडिगार्ड हिँड्ने गरेका थिए। बुधबारको हमलामा उनी पनि मारिए।
‘चार्ली हेब्डोलाई नियमित धम्की आउने गरेको थियो,' प्रकाशनका कानुनी सल्लाहकार रिचर्ड माल्काले भने, ‘ती धम्की निकै डरलाग्दा हुन्थे।'
यही डरधम्की र त्रासबीच चार्बले केहीअघि भनेका थिए, ‘हामी कुनै पनि किसिमको विसंगतिविरुद्ध आलोचना र व्यंग्य गर्न छाड्दैनौं।'
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा यस्तो निडर अभिव्यक्ति दिएकै कारण हुनसक्छ, उनले आफ्नो सम्पादक मण्डलका सदस्यहरूसहित ज्यान गुमाए।
करिब ६० हजार प्रति बिक्री हुने यो पत्रिका अन्य थुप्रै फ्रान्सेली अखबारजस्तै थिए, जसले सर्वसाधारणको सहायताबाटै आफ्नो आर्थिक स्रोत जुटाउने गरेको थियो। यसले प्रत्येक अंकमा एउटा कुपन पनि प्रकाशन गरेको हुन्थ्यो। इच्छुक पाठकले उक्त कुपन भरेर चेकसहित सहयोग पठाउने गर्थे।
यसको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी सन् १९१५ देखि प्रकाशन हुँदै आएको ‘ले कानार्ड एन्चेनी' हो। यसमा धेरैजसो ‘स्कुप' र गोप्य दस्तावेज छापिने गर्छन्। चार्ली हेब्डोले भने आफ्नो कटाक्ष र व्यंग्यकै कारण पाठकको मन जितेको थियो।
स्थापनादेखि नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा लडिरहेको यो पत्रिकाले आफ्नो यो अभियानलाई निरन्तरता दिइरहने जनाएको छ। शोकको घडीमा पनि अर्को साताको अंक १० लाख प्रति छाप्ने घोषणा गरिएको छ। यसका लागि गुगलले १ लाख ९५ हजार पाउन्ड सहयोग गर्ने भएको छ।
चार्ली हेब्डोको लडाइँमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै रेडियो फ्रान्स, ले मोन्डे र फ्रान्स टेलिभिजनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बाँचिरहू चार्ली हेब्डो'।